Ny fampisehoana tsy Retina dia voatanisa ao amin'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Carlos Sanchez | | Solosaina Mac, Apple products
Nanaitra an'izao tontolo izao i Apple fampisehoana retina amin'ny iPhone 4 dimy taona lasa izay, ary nanomboka tamin'izay dia vaovao tsara ho an'ireo tia ny fampisehoana Retina. Noraisin'ny iPad, ny iPod Touch, ny MacBook Pro, ny iMac, ny MacBook, ary ny farany koa ny Apple Watch. Ity hetsiky ny fanesorana ireo teboka avy amin'ny sehatry ny fahitantsika ity dia natao hahatratra ny vokatra rehetra, ary noho izany dia tsy maintsy esorintsika miandalana ireo mijanona miaraka amin'ny efijery mahazatra.
Ny farany nianjera dia ny iPad Mini an'ny taranaka voalohany, izay mbola namidy tamim-panajana ihany nefa nanjary iharan'ny tsy fisian'ny fampirantiana. Nisy koa ilay voninahitra mampisalasala amin'ny maha-fitaovana iOS farany manana hakitroka pixel mahazatra, noho izany dia nambara bebe kokoa ny fahafatesany ary fotoana kely fotsiny io.
Raha vantany vao nodiovina ny ampahany manontolo amin'ny iDevices, dia azo atao izao fa anjaran'ny Mac izao. Apple dia mivarotra ny iMac amin'ny habeny roa miaraka amin'ny efijery mahazatra, saingy antenaina fa hanome ilay maodely amin'ny habe kely kokoa amin'ny efijery 4K. Na izany aza, marina fa lafo ny vidin'ireny efijery ireny, ary mety ho somary miadana ny tetezamita amin'ity solosaina ity.
Raha ny solosaina finday dia toa mazava kokoa ny zava-drehetra. ny miseho retina Ny elanelam-potoana 11-15 santimetatra dia nanjary mora vidy kokoa ny fanamboarana azy ary fotoana fohy talohan'ny finday manontolo Apple finday misy Retina, angamba amin'ity taona ity aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Ny faran'ny fampisehoana tsy Retina dia manakaiky ihany
Ity daty ity dia lany andro tokoa. Apple dia efa nanolotra iMac Retina (1-inch) efa ho 27 taona lasa izay ary efa manana MacBook misy efijery Retina izay tsy an'ny fianakaviana Pro….
Pinterest dia manakarama injeniera Apple taloha hanatsara ny traikefa findainy